Archive du 20200403
Ady amin’ny Coronavirus Hisy fitiliana faobe eny Isotry, Ambondrona, Toamasina…
Nanapa-kevitra ny Filoham-pirenena , rehefa avy nivory niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny CCO Covid 19 fa, hidina eny amin'ny Fokontany nahitana “cas contact” na fifampikasohana rehetra ny borigady mpanao fitiliana.
Fanomezana toromarika Mila ireo olobe to-teny
Maro loatra ny tsy fanarahan-dalàna amin` izao fametrahana ny fahamehana ara-pahasalamana eto amintsika izao. “Maninona ny olona no tsy manaraka ny
Mponin’i Mahajanga Tsy afaka mivezivezy malalaka intsony Tsy afaka mifamezivezy araka izay tiany intsony ireo mponina ao Mahajanga nanomboka omaly alakamisy.
New York - Etazonia Olona iray isaky ny 3 minitra no matin’ny Coronavirus
Mandripaka tanteraka ny aretina “coronavirus” ao Etazonia. New York no foibeny izao fotoana izao.
BERTHIN ZOTO « Ekipa iraisam-pirenena henjana ny COVID-19 »
Nitondra hafatra ho an'ny tontolon'ny rugby mpanazatra nasionalin'ny rugby malagasy, Rafalimanana Berthin na i Berthin Zoto, ka nilaza fa :
Tahotry ny loza mety hitranga Naleon` ny teratany vahiny miala an’i Madagasikara
Mitohy hatrany ny fampodiana teratany vahiny monina eto Madagasikara ataon` ireo firenena maro.
Marary miisa 3 ao Ambatovy Ao an-toerana ihany no tsaboina sy araha-maso
Nampahatsiahy omaly ny orinasa Ambatovy fa nampahafantarina ny orinasa ny 31 martsa hariva, ny fisiana mpiasan’izy ireo miisa telo an’ny “sous-traitant” na mpiara-miombon’antoka ao aminy.
Arthuro Bris “Kajy efa hatramin’ny 2017 ny fanapariahana ny COVID 19…”
Kajy efa hatramin’ny taona 2017, raha ny fanadihadiana nataona haino aman-jery vahiny iray ny fanapariahana ny valan’aretina COVID 19 eto amin’izao tontolo izao. Gripa,